Ny firenena mba hanomezana fahafaham-po ny teny frantsay ny lehilahy sy ny vehivavy ao amin'ny fikarohana ny ho avy fitiavana faritany - Video firesahana amin'ny firaisana ara-nofo. Velona ny fampielezam-peo sy ny Fiarahana.
Ny frantsay dia mahita ny tenany ho toy ny efa nandray ny fanafiana masina miaraka amin'ny matanjaka ara-kolontsaina heviny, ary, ambonin'izany rehetra izany, matanjaka be izany ny fiaraha-monina, fiteny maha-izy azyKa raha toa ka isan izany ny fiaraha-monina sy mitady ny fitiavana, eto ny sasany amin'ireo firenena eto amin'izao tontolo izao izay afaka hihaona hafa miteny frantsay ny olona. TORO-hevitra: tranonkala Ity dia mitondra miaraka frantsay-bola izay te daty azy ireo. Mazava ho azy, Frantsa maka ny toerana voalohany, satria dia ny toerana hahaterahan'ny ny ekipam-pirenena frantsay sy ny teny misy azy. Ny fahiny ny tantara eto amin'ny firenena dia efa tany amin'ny taonjato faha- BC, rehefa grika mpanjanaka avy foci nanorina ny zanatany amin'ny Messalina, izay ankehitriny Marseille no misy. Amin'izao fotoana izao, i Frantsa no anisan'ny firenena mandroso indrindra eo amin'izao tontolo izao, ary, ambonin'izany rehetra izany, dia ekena ho toy ny zava-dehibe Eoropeana foiben'ny zavakanto sy ny kolontsaina.
Frantsay, ny olona mitady ny fitiavana ao amin'ity firenena ity efa afaka ny ho tonga teny amin'ny lasa ny kolontsaina samihafa sy ny vondrona ara-poko satria Frantsa nandray ny feo ny kolontsaina maro ny fiaraha-monina tamin'ny taonjato faharoa-polo.
Ny Montaigne Institute milaza fa an-tapitrisany ny fotsy hoditra, an-tapitrisany Avaratra Afrikana, ary an-tapitrisany, ary ny mainty hoditra avy any Azia nonina tany amin'ny firenena ny fiaviany. Kanada dia iray amin'ireo zava-dehibe indrindra miteny frantsay ny firenena ao amin'ny tontolo Tandrefana. Ny frantsay eo anatrehan in Canada efa tany amin'ny taonjato fahenina ambin'ny folo, raha ny frantsay Explorer Jacques Cartier nisafo Saint Lawrence renirano ary nandray ny fizakana ny taniny amin'ny anaran'ny mpanjaka François I Frantsa. Ny fanambarana ny Mpanjaka ny fanjakana dia zava-dehibe zava-nitranga teo amin'ny tantaran'ny miteny frantsay Canada, vokatry ny izay ny faritanin'i Québec, Vaovao any Frantsa, noforonina. Nanomboka tamin'izay, Quebec efa mirehareha ny Fikambanana amin'ny kolontsaina frantsay, ny fiteny sy ny finoana Katôlika. Tamin'ny fotoana nasionalista hetsika ao Quebec mitaky ny fiandrianam-pirenena, izany dia naka tafahoatra teny. Amin'ny farany, toy izany hetsika hita ny toerana eo amin'ny politika nasionaly, raha Quebec niezaka ny hiaro ny isam-paritra ny maha-izy azy. Amin'izao fotoana izao, Québec no hany canadian faritany anjakan'ny miteny frantsay mponina, ary ny hany tokana izay ihany no teny ofisialy izany eny anivon'ny faritany no frantsay.
Renivohitra ny faritany dia tanàna any Québec, izay ny kolontsaina frantsay dia miorim-paka ao amin'ny fitsipika fototry ny fiainana sy ny fiaraha-monina.
Manosika Belzika manana tantara lavabe ny nizara momba ny teny sy ny kolontsaina maha-izy azy amin'ny teny frantsay, angamba noho ny ara-jeografika akaiky any Frantsa. Ankoatra kely miteny alemana vondrona, misy roa tena fiteny amin'ny vondrona any Belzika fa hiteny zavatra, indrindra indrindra Flemish, izay mahatonga ny vahoaka, sy ny teny frantsay araka ny tenin-dreniny, ary indrindra fa ny Zavatra, izay mahatonga ny hafa ny mponina. Raha ny renivohitr'i Brioksela fomba ofisialy roa, izany no tena miteny frantsay faritra ao Flanders.
Ny frantsay fiaraha-monina ny Belzika manana ny Parlemanta, ny governemanta sy ny fitantanana.
Ny ara-politika manan-danja ny fiaraha-monina izany dia afaka tokoa ho tsaraina noho ny zava-misy fa efa nanao maro Belza Praiminisitra misy, anisan'izany ny indroa nahazo ny Philippe Morceau ary ny amin'izao fotoana izao Rudy Demoth. Kolontsaina, ny miteny frantsay, Belza fiaraha-monina ihany koa dia nampanan-karena ny teny frantsay amin'ny mpanoratra toy Charles Pilsner sy Georges Simenon avy Wallonia.
Ho an'ny rehetra ireo antony ireo, amin'ity faritra ity ny Belzika no vahaolana tsara indrindra ho an'ireo izay mitady mpiara-miasa frantsay tsy ao Frantsa, fa koa ao Eoropa.
Soisa, hafa firenena Eoropeana izay ny maro an'isa ao amin'ny miteny frantsay mponina mipetraka, dia Soisa. Ny rafitra ara-politika Soisa dia ny Repoblika Federaly ahitana cantons, eo izay cantons any Andrefana no mandrafitra ny miteny frantsay ny ankamaroan'ireo mponina manamorona Frantsa. Ny frantsay dia iray amin'ireo efatra ofisialy dia ny tenim-pirenena Soisa, toy ny eo ho eo amin'ny antsasaky ny miteny frantsay mponina tany Soisa ny fiainantsika tany miteny frantsay ao amin'ny firenena. Mandrakotra ny faritry ny cantons ny Geneva, Vaud, Neuchatel sy Jura. Izany dia ahitana ny miteny frantsay anjara ny Soisa any amin'ny ny cantons ny Bern, Valais sy ny Manaraka. Na dia ny teny hoe"miteny frantsay Soisa"dia tsy amin'ny fomba ofisialy ny misy ao amin'ny rafitra ara-politika, io no ampiasaina mba hanavahana sy hampiray ny miteny frantsay mponina Soisa. Ny Televisivo Suisse Romandie (TSR) televiziona manompo ny miteny frantsay Soisa ny fiaraha-monina manerana ny Suisse. Ny frantsay dia niteny tany Soisa dia saika iray ihany satria ny frantsay dia niteny any Frantsa. Na izany aza, any amin'ny tontolo ambanivohitra any amin'ny miteny frantsay ny ampahany amin'ny firenena, misy ny sasany miteny frantsay, tenim-paritra fantatra amin'ny anarana hoe"Soisa fotoana nampanonofy antsika", anisan'izany ny wodean, gurinesian, Eurasian, Imperial, Fribourg, ary nouvelle-Zélande frantsay. Noho ny akaiky ara-jeografika sy miteny frantsay ampahany Frantsa, ary koa ny maro hafa lafiny ara-kolontsaina, ny frantsay manana ny ambony indrindra ny hahita mpiara-miombon'antoka amin'ny mahazatra fiandohana ao amin'io ampahany Soisa. Monaco dia Fanapahana ao Eoropa Andrefana, nitondra ny lalampanorenana ny fanjakana tarihin'ny Prince albert II. Any amin'ny Tandrefana Eoropeana Riviera, Monaco sisin-tany Frantsa amin'ny lafiny telo, sy ny faritr'i Mediterane ny fahefatra. Monaco ny toerana ara-jeografika dia mazava ho azy nitondra ny mafy frantsay hery: mpiasa an'arivony travel avy any Frantsa ny asa isan'andro. Monaco dia tsara fihazana toerana ho an'ireo izay mitady mpiara-miasa tsy eo ny frantsay, fa koa avy amin'ny manan-karena ara-tsosialy kilasy. Ny Fanapahana, malemy fanahy rivo-piainana, ny tsara tarehy sy ny endriky ny fahafahana milalao nanao Monaco izao tontolo izao-malaza amin'ny fizahan-tany sy ny fialam-boly foibe ho an'ny manan-karena sy ny olo-malaza. Ny tanàna-fanjakàna dia iray amin'ireo ambony indrindra concentrations ny mpanapitrisa ao amin'ny izao tontolo izao amin'ny lafiny harin-karena faobe isam-batan'olona. Ny fiteny ofisialy dia ny teny frantsay, izay tsy mahagaga, satria izany no lehibe indrindra vondrona olom-pirenena frantsay. Luxembourg dia kely iray hafa ao amin'ny firenena dia tsara ny fihazana toerana ho an'izay mitady ny ho an'ny manan-karena ny mpiara-miasa frantsay. Izao tontolo izao vao niala ny Grand Duchy ny Luxembourg - kely tsy amin'ny firenena Eoropeana. izany dia landlocked firenena ao Eoropa Andrefana. Na izany aza, na dia eo aza ny habeny, dia mandroso indrindra ara-toekarena mpamatsy firenena ao amin'ny tontolo izao. Araka ny FMI, Luxembourg mihitsy aza ny ambony indrindra anarana harin-karena faobe isam-batan'olona manerana izao tontolo izao. Ny zava-dehibe indrindra amin'ny sehatry ny Luxembourg ny toe-karena ara-bola ny tolotra, indrindra fa ny sehatry ny banky. Avy Luxembourg, ny tsena ao an-toerana no somary kely, ary ny firenena ara-bola foibe dia ankamaroan'ny iraisam-pirenena. Manan-danja iray hafa fandraisana anjara amin'ny toe-karena ny famokarana sy ny fizahan-tany, izany hoe, ireo orinasa izay tokony ho nianatra rehefa mitady ho an'ny manan-karena sy ny mpiara-miasa ao amin'ity firenena ity. Ny teny frantsay no iray amin'ireo telo teny ofisialy ny Luxembourg, na dia ny hany Zavatra dia pirenena teny. Na izany aza, ny ankamaroan'ny mponina dia afaka mora foana miteny, mamaky ary manoratra ny teny frantsay, alemana ary ny Zavatra, ary mety mifamadika eo ireo teny ireo. Ny gazety ao Luxembourg, mamoaka kokoa ny vaovao iraisam-pirenena tamin'ny teny alemà, ara-kolontsaina, lafin-javatra io amin'ny teny frantsay sy dokam-barotra ao Zavatra. Ny fitomboan'ny niara fampiasana ny teny telo dia vokatry ny fitambaran'ny fomba amam-panao ara-tantara sy ara-toekarena dia tsy maintsy ilaina.
Miteny frantsay Soisa no miteny frantsay ampahany Soisa
Fomba nentim-paharazana, alemana no tena fiteny ny fampianarana any an-tsekoly, raha ny frantsay dia ampianarina amin'ny maha-foto-kevitra avy any amin'ny kilasy faharoa. Na izany aza, nandritra ny taona maro, ny teny frantsay dia lasa miha manan-danja, sy ny zavatra toy ny fitenin ny fampianarana dia efa nosoloina faharoa ny fanabeazana, izay voafetra ho manokana ny antokony ao amin'ny teny sy ny literatiora. Ny teny frantsay no tena fitenin ny lalàna sy ny governemanta ny kabary. Eny an-dalana anarana, ny famantarana sy ny karazan-tsakafo dia voasoratra tamin'ny teny frantsay ary ireo nisafidy ny nahita fianarana, ireo manam-pahaizana vato nasondrotry ny tany. Ny teny frantsay no ny lingua Franca ampiasaina mifandray amin'ny mpifindra monina izay efa miteny amin'ny hafa ny olon-tiany teny avy amin'ny faritra hafa ao Eoropa. Repoblika demokratika ny Kongo ny Repoblika Demokratika ny Kongo dia ao amin'ny lisitry ny firenena izay afaka hihaona frantsay lehilahy sy ny vehivavy, noho ny antony tsotra hoe izany no iray amin'ny lehibe indrindra amin'ny firenena miteny frantsay amin'ny vahoaka. Ny tantara ny teny frantsay hery mitarika ao amin'ity firenena Afrikana dia noho ny fanjanahana an i Congo avy any Belzika tamin'ny faramparan'ny XIX sy ny taonjato XX. Ny teny frantsay no teny ofisialy ny Repoblika Demokratika ny Kongo. Mba hanamora ny fifandraisana eo amin'ny isan-karazany ny vondrona ara-poko ny Kongo, hatramin'ny fiteny ampiasaina manerana ny firenena, dia tokony ho ethnolinguistic. Raha mitady ho an'ny miteny frantsay ao Afrika mpiara-miombon'antoka, dia mety hahita azy ireo ao amin'ny Repoblika Demokratika ny Kongo, na ny maoderina ny tontolo iainana ao an-drenivohitra Kinshasa, na any amin'ny faritra ambanivohitra izay ny teny frantsay no mbola manompo toy ny lingua Franca.
Saka-d'Ivory morontsiraka No firenena Afrikana hafa lehibe miteny frantsay mponina.'Côte d'ivoire, any amin'ny Tandrefana ny lelan ny kaontinanta.
Ny herin'ny teny frantsay ny teny sy ny soratra eto dia indrindra indrindra mifandraika amin'ny tantaran'ny fanjanahantany Frantsa any amin'ny xviii sy xix taonjato maro. Nandritra izany fotoana izany, ny fanjanahantany frantsay ny politika tafiditra hevitra voaray sy ny Fikambanana. Amin'ny lafiny iray, izy ireo dia mifototra amin'ny filazana fa fahambonian'ny kolontsaina frantsay ny hafa rehetra, fa mandritra izany fotoana izany izy ireo, dia nandrisika ny fanitarana ny teny frantsay, ny andrim-panjakana, ny lalàna, ny fomba amam-panao sy fahazarana ao amin'ny zanatany mba toy izany araka izay kely maro ny Ivoariana ny Tandrefana no niaviany taty aoriana dia nanjary afaka mampihatra ny zom-pirenena frantsay. Na izany aza, ao amin'ny vanim-potoana maoderina, ny fitarihana ny kolontsaina frantsay dia be nihena, ary ny frantsay dia mbola manohy ny asa maha-iray ny teny ofisialy ao amin'ny firenena. Izany dia tsy ny fiteny ny fampianarana ao amin'ny toeram-pampianarana ihany, fa ny fiteny ny lingua Franca any amin'ny firenena izay maro ireo foko sy ny vondrona ara-poko, ny tsirairay izay manana ny teny manokana. Saka-d'Ivory morontsiraka tsara toerana mahasarika miteny frantsay mpiara-miasa ho an'ny taranaka Afrikana.
Haiti eo Anivon ny firenena miteny frantsay izao tontolo izao - ny firenena ao Karaiba fa teo ambanin'ny teny frantsay eo amin'ny taona maro ny fotoana Eoropeana fanjanahantany.
Na izany aza, noho ny antony maro, Haiti mbola ny iray ihany amin'ireo firenena ao Karaiba.
Izany no voalohany tsy miankina firenena ao Amerika latina sy Karaiba, amin'ny voalohany mainty-led Repoblika eo amin'izao tontolo izao.
Amin'izao fotoana izao, Haiti dia ny be mponina indrindra, izay miteny frantsay, tsy miankina firenena any Amerika. Ankoatra Canada, Haiti dia ny hany tsy miankina firenena ao Amerika izay efa voatondro teny frantsay ho teny ofisialy. Ara-tantara, ny teny frantsay hery mitarika dia voafaritra ao amin'ny faritra Andrefan'ny nosy, izay zanatany frantsay no naorina. Na dia miloko isan-karazany ny mponina eto am-piandohana, dia tonga toy ny andevo avy any Afrika, nandritra ny fotoana firazanana mifangaro ny teraka ny andevo, vehivavy, sy ny teny frantsay tompo mandroso. Na dia ny farany indraindray afaka ny slaveholders sy ny ankizy, ka ny kilasy free Negroes tsikelikely matotra, izay nanana ny zo ara-politika ao amin'ny zanatany sy izy ireo nanohy ny frantsay fomba fiainana, raha mbola ao ny Avaratra ny mbola fanafarana ny andevo avy any Afrika nitarika ho miavaka kokoa fiarovana ny Afrikana ara-kolontsaina fomba amam-panao. Ka raha mitady ho an'ny miteny frantsay, ny olona ao Karaiba taranaka avy any Haiti, dia tokony hijanona ao an-Andrefan'ny nosy.
Ny fiteny ofisialin'ny firenena ity dia ny frantsay sy ny Haitiana amin'ny teny Kiriolona.
Frantsay hery mitarika hita ao indrindra ny nosy ny fanehoana ara-kolontsaina, anisan'izany Haiti, ny fiteny, ny mozika, sy ny fivavahana.
मैत्री एक स्त्री
chat Mampiaraka manerana izao tontolo izao ny lahatsary ny lahatsary amin'ny chat an-tserasera amin'ny zazavavy maimaim-poana ny Fiarahana amin'ny fifandraisana chatroulette maimaim-poana ny lahatsary online chat Mampiaraka sary Mampiaraka ny lahatsary amin'ny chat free ny lahatsary amin'ny chat maimaim-poana amin'ny aterineto amin'ny chat roulette zazavavy an-tserasera tsy misy fisoratana anarana video Mampiaraka online